Wenzani uSemalt futhi ngani?
Ngabe uSemalt usiza kanjani nge-SEO?
Yini i-Website Analytics
Ngabe uSemalt usiza kanjani ngokuhlaziya iwebhusayithi?
I-Semalt yisikhungo sokumaketha esigcwele esigcwele esinikeza uhla lwezinsizakalo ezibalulekile ukusiza amabhizinisi ukuthi akhule abe ngamazinga amasha: I-AutoSEO, i-FullSEO, iSemalt Web Analytics, ukuthuthukiswa kwewebhu, ukukhiqizwa kwevidiyo neminye imisebenzi.
ISemalt yasungulwa ngonyaka we-2013 futhi inerekhodi elingapheli leshumi leminyaka ekusizeni amabhizinisi ukufika kumazinga amasha wethrafikhi kanye nokukhula ngokusebenzisa amathuluzi okusika onqenqemeni lwe-SEO, ama-analytics kanye namasu wokukhangisa abekiwe.
I-Semalt isiza amabhizinisi ukuthi aphumelele kakhulu ngokuthuthukisa amazinga abo e-SEO, ngokwenza ngcono imiphumela yawo yokuthengisa ngokusebenzisa ama-analytics wewebhusayithi aseceleni nangokunikeza uhla lwezinye izinsizakalo ezibalulekile amabhizinisi amaningi azidingayo ukuze akhule njengokuthuthuka kwewebhu nokukhiqizwa kwamavidiyo kufaka phakathi amavidiyo wokuchaza.
I-Semalt inezinhloso zokusiza ngalinye lamakhasimende alo ukufezekisa amazinga empumelelo amasha ngokunikezela ngezinsizakalo ze-SEO nezomnotho ezisebenziseka kalula.
USemalt uthi inhloso yawo ukusiza amakhasimende ayo ukuba afike eqhulwini ku-Google nakwezempilo. Izabalazela ukuhlinzeka amakhasimende ayo ngezinsizakalo zamakhasimende ezisabelayo kanye nezinsizakalo ezahlukahlukene zokumaketha abangazisebenzisa kunoma isiphi isabelomali.
Ukusebenza kwe-SEO noma injini yokusesha kumane inqubo yokuthola ithrafikhi ethe xaxa emiphumeleni yokusesha yemvelo yezinjini zokucinga.
Yonke injini yokusesha enkulu (iGoogle ne-Bing) inohlu lwemiphumela yokucinga yokuqala olufaka amakhasi wewebhu nezinye izinhlobo zokuqukethwe ezinjengamavidiyo nokuthunyelwe kwabezindaba zokuxhumana.
Ukusebenziseka ngokuphelele kwezinjini zokucinga yinqubo yokuthola amakhasi webhizinisi nokuqukethwe ukuze kubonakale ngokubonakalayo kuleyo miphumela. Inqubo enezinhlaka eziningi ezibandakanya ukukhethwa kwamagama angukhiye, ukwakhiwa kwesixhumanisi, ukwenziwa kwekhasi nokwenza ezinye izinyathelo eziningana eziqhubekayo.
Esithombeni esingezansi, i-SEO isho ukusiza iwebhusayithi yakho ukuthi ibonakale endaweni ethi “organic” lapho amawebhusayithi ezothuthukiswa khona lapho imizamo ye-SEO isetshenziswa ngenkathi kuboniswa indawo “ekhokhelwayo” kubiza ngayinye yalawo mawebhusayithi imali ngokuchofoza ngakunye (PPC) ukukhangisa.
Kusukela ngo-2013, uSemalt usize inqwaba yamabhizinisi ngokuthuthukisa injini yokucinga kwawo futhi unerekhodi elide lezindaba zempumelelo ezivela emizamweni yazo.
Namuhla uSemalt usiza amabhizinisi anenjini yokucinga esebenza kakhulu ngezinsizakalo ezimbili ezibalulekile: I-Auto SEO ne-SEO Egcwele, echazwe ngezansi.
USemalt futhi unikeza Ukubonisana kwamahhala kwe-SEO ukusiza amabhizinisi ekuboneni ukuthi yiziphi izidingo zawo zamanje futhi anqume phakathi kwamaphakeji amabili phakathi kweminye imisebenzi enikezwa yinkampani.
I-Auto SEO iyinsizakalo yokungena ye-SEO Semalt yokungena kwe-SEO enikeza uhla lwezinto ze-SEO ngentengo ephansi yokuqala. Izinsizakalo zifaka: ukwenziwa kwekhasi, ukwakhiwa kwesixhumanisi, ucwaningo lwegama elingukhiye, ukuthuthukiswa kokubonakala kwewebhusayithi kanye nokuhlaziywa kwewebhu.
ISemalt inikezela lokhu njengokukhetha okuhle kwamabhizinisi aqala phansi noma angaqiniseki ukuthi aqale ngaphi ngokwenza injini yokusesha. I-Auto SEO ifaka ubuchwepheshe obumhlophe bokucinga kokusesha injini yokusiza amawebhusayithi ukufeza amazinga aphezulu ngokushesha okukhulu.
Kubiza nje u- $ 0,99 ukuqala isivivinyo sezinsuku eziyi-14 se-Auto SEO, futhi ukusuka lapho izindleko zinengqondo cishe kuma- $ 99 ngenyanga ngezaphulelo zezinyanga ezi-3, izinyanga eziyi-6, nokuthengwa konyaka.
Ngoba i-Auto SEO inikeza izindleko eziphansi kangako, le nsizakalo idume kakhulu phakathi kwezinkampani zokuqala kanye nalezo ezifuna ukuzuza ithrafikhi yokuqala ngemizamo yokusebenzisa injini yokusesha ngaphandle kokuzibophezela kwisabelomali esiphakeme sanyanga esidingwa ezinye izinhlangano eziningi.
I-SEO ephelele iyindlela yesibili ephakeme enikelwe yiSemalt enezici ezahlukahlukene ezingeni eliphezulu lenkonzo kune-Auto SEO.
I-SEO ephelele inikeza iphakethe eligcwele elibandakanya: ukubhala okuqukethwe, ukwenziwa kwangaphakathi, ukulungiswa kwamaphutha wewebhusayithi, ukuhola isixhumanisi, ukusekelwa okuqhubekayo nokubonisana kanye nanoma yiziphi izinsizakalo ezengeziwe ezingadingwa yikhasimende.
Amakhasimende weSummalt's Full SEO afaka izinkampani ezinkulu ze-e-commerce kanye nama-webmasters ngamanye kanye nabasunguli bokuqala. Izinketho ezintathu zitholakala kwe-SEO Egcwele: yasendaweni, ezweni lonke noma i-SEO yomhlaba wonke kuya ngesifunda ikhasimende elifuna ukusiqondisa.
I-SEO ephelele ingukukhetha okuhle kwamabhizinisi aseqala ukungena esigabeni sokukhula futhi kudingeka aqinisekise ukuthi iwebhusayithi yawo ihambisana namazinga wakamuva we-SEO, ukuthi noma yimaphi amaphutha we-SEO ancishisiwe, nalezo ezifuna imiphumela ye-SEO efushane nede.
Leli zinga eliphakeme lensizakalo lisiza amabhizinisi ukuthi aqinisekise ukuthi yonke imisebenzi ye-SEO edingekayo ukukhuphuka ngobuningi futhi ihlala lapho iyenziwa njalo ngenyanga: ukusuka kusixhumanisi sokuxhumanisa ekwakhiweni kokuqukethwe, ukulungiswa kwamaphutha e-webhusayithi, ukwenziwa kwekhasi, kanye nokucwaninga kwamagama.
Intengo ye-SEO Egcwele iyahlukahluka kuye ngezidingo zeklayenti nephrojekthi, futhi imininingwane eminingi ngamanani ingaqinisekiswa ngokuxhumana nomunye wabamele bakaSemalt.
Yini ukuhlaziya iwebhusayithi?
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi yizinhlobo ezahlukahlukene zedatha ebanjiwe mayelana newebhusayithi: noma ngabe iyidatha yangaphandle ephathelene nesikhundla sezinjini zokusesha kanye namazinga wokuncintisana noma idatha yangaphakathi maqondana nethrafikhi, amanani wokuguqula, amanani ashibhile, njll.
Le datha ingasetshenziswa ukwenza ngcono iwebhusayithi ngezindlela eziningi. Njengoba imininingwane isenhliziyweni yemikhankaso esebenza ngempumelelo yokuthengisa, kubalulekile ukuncika ekuhlaziyeni kwewebhusayithi ukuphumelela isikhathi eside ngewebhusayithi.
Izibonelo zokuhlaziywa kwewebhusayithi zingafaka isikhundla sezikhundla samagama asemqoka, uhlu lwamagama angukhiye akhiqizwe kuwebhusayithi, imibiko yokusetshenziswa kwekhasi, uhlu lwamawebhusayithi ancintisanayo nokubekwa kwawo emazingeni amaningi, ezinye izibalo eziningi.
Ngabe uSemalt usiza kanjani ngabahlaziyi bewebhusayithi?
I-Semalt inikela ngethuluzi ephezulu kakhulu ye-web analytics evumela ukuthi abasebenzisi bayo benze imisebenzi ehlukahlukene yebhizinisi labo. Amazinga wegama elingukhiye angahlolwa masinyane ngethuluzi futhi abonise ukubonakala kwewebhusayithi ku-inthanethi.
Ukuncintisana amawebhusayithi kungabuye kubonwe. Amaphutha wokusebenziseka kwekhasi angabonakala. Imibiko eningiwe yewebhusayithi ingadonswa nganoma yisiphi isikhathi.
Ithuluzi lokuhlaziya lewebhusayithi likaSemalt linikeza abaphathi bewebhu amandla wokuhlola amathuba amasha okuthengisa futhi banqume ukuthi yini ngempela esebenza ngemizamo yabo ye-SEO nokuthi yini engenziwa ngcono kuyo.
Ithuluzi lokuhlaziya likaSemalt lidume kakhulu futhi linikeza uhla lwamamojula kufaka phakathi:
Iziphakamiso zegama elingukhiye ezinikeza imibono yamagama angukhiye amasha ebhizinisi
Ukuhlelwa kwamagama angukhiye ukulandelela isikhundla segama elingukhiye ezinjini zokucinga nsuku zonke
Ukuqashwa komkhiqizo okubonisa ukuthandwa kwewebhusayithi
Imodyuli yomlando wesikhundla sokhiye obonisa amazinga ngaphambi kwesikhathi
Umhloli wamandla wokuncintisana ovumela abasebenzisi ukuthi bacwaninge ama-rankings ancintisana nabo namagama asemqoka
Futhi ukuhlaziywa kwewebhusayithi okuhlaziya iwebhusayithi ukuze ihambisane nemikhuba emihle kakhulu ye-SEO.
Iqembu likaSemalt litholakala izinsuku ezingama-365 ngonyaka no-24/7 ukusiza amakhasimende alo ngokusethwa ngezinsizakalo zabo ze-Auto noma i-Full SEO noma enye imisebenzi etholwa yinkampani.
USemalt ubhekwe phambili eKyiv, e-Ukraine kepha iqembu lakhe lomhlaba wonke linikeza ukwesekwa nokuxhumana kwamakhasimende ngezilimi eziningi kufaka phakathi isiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiTurkey nokuningi.
Ngokungafani nezinye izinhlangano ezivame ukungabi neqembu langempela, iqembu likaSemalt lifinyeleleka kakhulu futhi lingahlangatshezwa nganoma yisiphi isikhathi ukufunda okwengeziwe ngezinsizakalo zabo ze-SEO, ukuhlaziya iwebhu, ukuthuthukiswa kwewebhu, izinsizakalo zokudala ividiyo nokunye.
Iqiniso elihehayo: USemalt unefudu lesilwane esithandekayo okuthiwa nguTurbo osebenza njenge-mascot yenkampani futhi uhlala ehhovisi. Uma kwenzeka uvakashela uSemalt ehhovisi labo eKyiv, ungakhohlwa ukuma uthi sawubona kuTurbo!
ISemalt isize izinkampani eziningi ukuthi zifinyelele emazingeni amasha empumelelo yebhizinisi ngokuthola ithrafikhi eningi, ukuthuthukisa ukumaketha kokuqukethwe, ukuhlaziya i-analytics yokukhula nokuningi.
Ngenxa yalokho, inkampani inerekhodi elide lamakhulu amakhasimende anelisekile, amaningi awo angamakhasimende aphindekile athembekile.
Noma ibuphi lobu bufakazi bungabukwa engxenyeni yeClient Testimonial yewebhusayithi yeSemalt futhi ifaka ubufakazi obungaphezu kwama-30 + bamavidiyo, ubufakazi obungaphezulu kuka-140 + obubhaliwe kanye nezifundo ezingama-24 ezinemininingwane yamacala, kanye nokunye ukubukeza okuningi ku-Google naku-Facebook.
USemalt ushicilele inombolo enkulu yezifundo zamacala ezinemininingwane kwiwebhusayithi yakhe ekhombise ukwanda kwethrafikhi ngenxa yokusetshenziswa kwe-Auto SEO yayo noma izinsizakalo ezigcwele ze-SEO. Isifundo ngasinye secala laso sinemininingwane eminingi engafundwa ngokuchofoza kunoma yikuphi ukufakwa kuhlu.
Noma ngubani onentshisekelo ku-SEO ka-Semalt noma ezinye izinsizakalo zokumaketha angavakashela iwebhusayithi yakhe ukubheka uhlu olugcwele lwezifundo zamacala aqokomisa ukusebenza kwemisebenzi ehlukile yokumaketha enikezwe inkampani.
Ukuthintana noSemalt ukuxoxa nge-SEO yayo nezinye izinsizakalo kulula. Iwebhusayithi kulula ukuyisebenzisa ukuze uthole izinketho ze-SEO yamahhala ye-SEO noma uqalise ngombiko wokusebenza kwewebhusayithi wamahhala.
USemalt unikeza ukusekelwa kwezilimi ezahlukahlukene neqembu lomhlaba wonke elaphendula ngokushesha imibuzo. Ukuqala ngoSemalt kungaba yinto elula yokuthola umbiko wamahhala wokusebenza kwewebhusayithi noma ukuxhumana nomunye wabamele babo ukuze asizakale ngokubonisana kwe-SEO okuvumelanayo.